🥇 ▷ Meizu X8 ayaa ugu dambeyntii soo ifbaxay iyagoo leh cuncun iyo Snapdragon 710: miyay ku xasuusineysaa wax? (sawir) ✅
Meizu X8 ayaa ugu dambeyntii soo ifbaxay iyagoo leh cuncun iyo Snapdragon 710: miyay ku xasuusineysaa wax? (sawir)
Qiyaastii hal bil ka hor waxaan markii ugu horeysay kaala hadalnay aaladda soo socota oo ay u badan tahay inay soo bandhigi doonaan Meizu oo barbar socota Meizu 16 iyo 16 Plus. Maanta waxaan ku soo noqonaynaa mawduuca maxaa yeelay waxay soo baxeen macluumaad cusub oo wax ku ool ah qalabka.
Macluumaadka aan ka hadlayno ayaa dhammaantood lagu soo daraySawir lagu muujiyey hoose: waxa aad aragto waa unug horay loo soo saaray Meizu X8, oo muujinaya a feejignaan meeleeya hab caadi ah, ilaahyada cidhifyada oo aan aad u dhuuban, Nidaamka ku saleysan Android Oreo 8.1 iyo isdhaxgalka SoC Snapdragon 710. Macluumaadkaan dambe waa mid gebi ahaanba la jaan qaadaya wixii aan hore u fileynay. Waxaan u aragnaa isbarbar dhig Xiaomi Mi8 SE, kaas oo isku daraya isla processor-ka, in kastoo ay isku mid yihiin Maamulaha Meizu wuxuu sheegay in X8 uu ka fiicnaan doono aaladda Xiaomi.
Xilligan xaadirka, ma soo sheegi karno faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan taariikhda soo gudbinta iyo inta kale ee astaamaha farsamada ee casriga ah. Xaqiiqdi waanu kugula socodsiin doonnaa sheekada.